'Chucky' dia nametraka ny anjara asan'ny tanora sy ny ratsy Charles Lee Ray - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Chucky' dia nametraka ny andraikitry ny tanora sy ny ratsy Charles Lee Ray
by Trey Hilburn III Jolay 21, 2021
by Trey Hilburn III Jolay 21, 2021 1,415 hevitra
Tsy handainga aho, izany rehetra izany Chucky vaovao no sasany amin'ireo zavatra mahaliana indrindra mitranga amin'ny horohoro. SYFY's Chucky toa ho fipoahana izany ary raha dinihinao fa i Don Mancini no hitarika an'io zavatra io dia mpangalatra mihitsy isika. Ny rad farany Chucky vaovao, manaraka ity tranofiara lehibe efa nozarainay tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, dia ny famoahana an'i Charles Lee Ray, tanora sady ratsy fanahy.
Tapitra, ny taona 2019 The Prodigy ary tena olon-dratsy mpanao ratsy tanora izy, handray ny andraikitr'i Charles Lee Ray ao Chucky. David Kohlsmith dia vonona handeha an-tsaina amin'ny ankizy ratsy fanahy hafa. Tompony tanteraka ilay horohoro tany The Prodigy. Azoko antoka fa hanao mahagaga eto koa izy.
Alohan'ny hamoizan'ny sainy ny sainy rehetra. Te-hanipika aho fa i Brad Dourif dia hanome feo indray Chucky. Ny zavatra rehetra Charles Lee Ray adolantsento dia ho zavatra hafa tanteraka.
Taorian'ny fivarotana saribakoly Chucky taloha tamin'ny fivarotana teo an-tokontany, dia nanjary korontana ny tanàna amerikanina iray mahafinaritra rehefa nanomboka nampiharihary ireo fihatsarambelatsihy sy tsiambaratelo tao an-tanàna. Mandritra izany fotoana izany, ny fahatongavan'ireo fahavalo sy mpiray dina tamin'ny lasa Chucky dia nandrahona ny hampiharihary ny marina tao ambadiky ny famonoana, ary koa ny fiavian'ilay saribakoly devoly ho toy ny zaza toa olon-tsotra izay nanjary an'io biby goavambe malaza io.
Chucky's Premieres andian-dahatsoratra valo amin'ny USA Network sy SYFY manomboka ny 12 Oktobra. Faly ve ianao amin'ny safidy ho an'ny tanora Charles Lee Ray? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.